Everton oo dib u soo nooleysay awooddeeda - BBC News Somali
Everton oo dib u soo nooleysay awooddeeda
Image caption 10 gool ayuu Rooney ka qeybgalay, sagaalkii ciyaarood ee ugu dambeeyay ee uu dheelay
Wayne Rooney ayaa sheegay in Everton ay "ku soo noqotay sidii ay ahaan jirtay" ka dib markii ay ka badiyeen kooxda Swansea City. Waxay sii wadaan guulaha ay gaarayaan tan iyo markii uu Sam Allardyce u noqday macallimka.
Kooxda Swansea oo xawaare ku gashay garoonka Everton oo ay marti ku ahayd, ayaa goolka la hormartay. Laakiin Everton ayaa ku horeysay dhanka goolasha markii ay dhammaaneysay qeybtii koobaad ee ciyaarta.
Rooney ayaa laga badbaadiyay gool ku laad, balse taasi waxay u muuqatay in aysan niyad jebin.
"Waxay ila tahay in tababaraha uu aasaakii kooxda soo celiyay," ayuu yiri Rooney oo intaa ku daray "haddii gool na looga hormari lahaa bilowgii xilli ciyaareedkan, waxaan dareemi lahayn in aynaan iska soo gudi karin oo sidaas ayaa na looga badin lahaa. Hadda aad ayaan u adagnahay".
"Umaynaan ciyaari jirin sida aan awoodno, balse hadda xoog ayaan yeelanay. Afar isbuuc ka hor, ciyaartan oo kale, waa nalooga adkaan lahaa. Waxaan rajeynayaa inta uusan sanadka dhammaan ka hor, in aan ciyaaro kale badin dooonno."